Aftonbladet: Caruurta Soomaalida ilkaha ayay ka jiranyihiin | Somaliska
Mowduuc lagu qoray wargeyska Aftonbladet ayaa shalay lagu soo bandhigay in caruurta Soomaaliyeed ee ku nool Sweden ay dhibaato weyn ka haysato caafimaadka ilkaha, iyadoo qaarbadan ay ilkaha ka dhacaan iyo kuwa kalena ay ka jiranyihiin ilkaha. Baaritaanka oo laga sameeyay gobolka Kronoberg kaasoo ay ka qaybqaateen 310 caruur Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in caruurta Soomaalida marka loo barbar dhigo caruurta kale ay dhibaato weyn ka qabaan ilkaha.
Inger Svensson oo ah dantiiste baaritaanka ka qeyb qaatay ayaa xaalada caruurta Soomaalida ku tilmaamay mid aad u liidato, isagoo sheegay in dhamaantood ay u baahanyihiin in ilkaha laga saaro ama dayactir lagu sameeyo. Inger Svensson ayaa sababta ka dambaysa caafimaad darada caruurta Soomaalida ku sheegay dhaqanka Soomaalida oo sonkorta aad u isticmaala.
“Caruurtaan waxay cuneen sonkor aad u badan, nacnaca qaali kama ahan Somalia” ayuu yiri Inger Svensson. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in caruurta yaryar ay cadaydaan balse waalidkooda aysan ku caawin arintaas. Inta badan caruurta ayaa la sheegay in aysan waligood booqan dhaqtarka ilkaha.
Si kastaba ha ahaatee, mashruucaan ayaa lagu tilmaamay mid guul ku dhamaaday, iyadoo caruurta Soomaalida ilkaha loo sifeeyay. Isla barnaamijkaan ayaa hada ka dib loo isticmaali doonaa caruurta cusub ee magangalyada ka dalbata Sweden ee ku sugan xeryaha qaxootiga.
TV4 oo diiday dacaayada cunsuriyiinta
Waxaa sabab u ah nacnaca iyo macmacaanka badan. Waxaa surto gal xitaa Awoowgaa mise aabaha hadii u ilka xumaa adna inaad ilko xumo kugu dhici karto.
Jimcaale waa arin aan dareemi karno, waana arin ila saxan, sababtoo ah ilmaheena Soomaaliyeed nacnaca looma xadido kolkeey ooyaanba waa lagu aamusiyaa.
Xitaa anigaa wax badan haween Soomaaliyeed meelo kula kulmay kalana hadlay in ilmaha yaryar laga daayo Jallaatada iyo nacnaca ,, waana arin jira .
arintaasi waa mid iska cad in aan macaanka aad u cuno xitaa dadka waa weyn ee cudurada u sahlan aanan iska xadidin sokorta